Kubatsira kwedu - UP Boka
A yekutengesa brand bhizinesi iyo inoiswa mari neindasitiri uye pamwe indasitiri uye kutengeserana.
Shanghai UPG Yepasi Pose Kutengesa kambani ikambani yehunyanzvi yekutengesa iyo inoiswa mari ne UP Boka rakakosha rebazi mabhizinesi pamwe chete, iyo kambani rave iro rinonyanya kushandira uye rine simba muchiratidzo mukudhinda nekurongedza michina indasitiri muChina.
Isu tine kugona kwepamusoro, mhando yepamusoro, yakatsiga uye yehunyanzvi yekutengeserana inoshanda timu
ln yemaitiro enguva refu ekutengesa, isu tinosimudzira uye nekumisikidza mitauro yakawanda, nyanzvi, yakakwira diathesis uye vanogonesesa vashandi timu, iyo inoumba mabhizimusi makuru uye akasimba ekutengesa mune ino indasitiri. Pakati peboka redu rinoshanda, 97% vanowana degree rekubatana uye dhigirii rechikoro, 40% yavo pachavo epakati mazinga ehunyanzvi, madhigirii echikoro kana pamusoro.
Isu tinotevedzera huzivi hwekuti "pamusoro-kukosha kwebasa, kupayona uye pragmatic, uye Win-kuhwina kubatana"
Isu tinotanga kubva kuhunyanzvi system, kugadzirisa masisitimu mashandiro, zvishoma nezvishoma kurima uye kugadzira kukosha kwekutsvaga, uye bhizinesi tsika iyo inosimbisa mu "Kutendeseka uye kuvimba kwakakodzera, Kushingairira uye kuvimbisa, Tevera kugona kwakanaka uye kugona, pamusoro-kukosha basa". Isu tinogara tichisimbisa mhando yezvigadzirwa uye sevhisi, kumisikidza hurefu-uye hwakagadzikana hukama hwekudyidzana nevapepi vezvipfuyo pamwe nevatengi vekunze kuti vabatsirane.
Ukuru hwezvakawanda zviwanikwa, zvinoenderana mumutsara, yakanyanya sarudzo
Isu tasimbisa kwenguva yakareba nzira dzekudyidzana pamwe neanodarika makumi mashanu anodhura, emhando yepamusoro uye anozivikanwa emakambani emakambani uye mafekitori, ayo anofukidza kudhinda nekurongedza, chikafu nemishonga kurongedza uye rabha uye epurasitiki michina, uye tinoumba akawanda-chikamu, multispecies uye multilevel revatema yepamusoro uye zvinopa nyore sevhisi chiteshi chevatengi vekunze.
Yakanyatsorongwa, yakakwira kuisa, yakazara kufukidza kuratidzira kushambadza
Iyo hombe kudyara kweanopfuura makumi maviri emarudzi nyanzvi kuratidzira uye anopfuura bhiriyoni rimwe rekutengesa huwandu pagore inoita kuti kambani yedu izivikanwe mhiri kwemakungwa uye ive yemukurumbira wakakwirira mumusika wekunze nekunze. indasitiri muChina.
Simbisa chiteshi kuvaka, sevhisi kune vatengi vepasirese, akawanda ekutengesa masisitimu maitiro
Kuburikidza nemakore akati wandeiffort, takatumira zvigadzirwa kunyika dzinopfuura makumi masere (kwete Asia chete asi zvakare Europe, Africa, South America, North America neOceania) uye takamisa kudyidzana kwenguva yakareba nevanozvigovera uye nzira dzekutengesa munyika dzinopfuura makumi mana. uye matunhu, ayo anoita basa rakakosha kune yakavhurika yekunze musika uye chengetedza sevhisi terminal vatengi.